UNATHAN FIELDER UTROLLS SEAN SPICER NGOKWAZISA NGENKOHLAKALO - UKUCHASWA
UNathan Fielder u-Trolling u-Sean Spicer ngoKwazisa ngoKhukula kunye ne-Athletic Wear
Umdlalo weqonga kaNathan Fielder ayinguye wonke umntu. Umdali weComedy Central UNatan wakho (kunye nendoda esemva kwale Dumb Starbucks gag) eyaziwa kakhulu ngokwenza abantu bangonwabi. Ngokwam, ayilohlobo lwam endiluthandayo oluhlekisayo. Ngaphandle koko, kuyabonakala ukuba, xa umntu enziwe engonwabi nguSean Spicer, uNobhala weendaba zeWhite House kunye nomququzeleli wexesha lamaZiko okuBulawa kwabantu ngenkohlakalo. (Elinye igama eliyinyani leenkampu zoxinaniso!) Oko kuhamba kabini xa ukungonwabi kwakhe kukhokelela ekwazisweni kwabantu kunye nemfundo.
Ngaphandle koko, kuyabonakala ukuba, xa umntu enziwe engonwabi nguSean Spicer, uNobhala weendaba zeWhite House kunye nomququzeleli wexesha lamaZiko okuBulawa kwabantu ngenkohlakalo. (Elinye igama eliyinyani leenkampu zoxinaniso!) Oko kuhamba kabini xa ukungonwabi kwakhe kukhokelela ekwazisweni kwabantu kunye nemfundo.
UFielder waseka inkampani yokunxiba iSummit Ice kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, nge Ivenkile ephumayo eVancouver kunye ne- $ 150,000 yomnikelo kwimfundo yamaNazi. Ukusuka kwinkampani iwebhusayithi :
I-Summit Ice Apparel yasekwa ngonyaka ka-2015, xa uMnu Fielder waqondayo ukuba inkampani ayithandayo yebhatyi, iTaiga eseVancouver, yayipapashe irhafu kuHolocaust denier uDoug Collins kwenye yeekhathalogu zabo zasebusika. Umnumzana Fielder waqaphela ngoko nangoko isidingo kwindawo yentengiso yenkampani yeempahla zangaphandle ezazikhuthaza elubala ibali lokwenyani leNkohlakalo.
Iphepha lasekhaya leSummit Ice linikezelwe ngokulinganayo, emva koko, ekufundiseni abathengi malunga netekhnoloji yayo yokugquma ephezulu, kunye nokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo.
Ke xa uSean Spicer eqala ukuyenza icace gca (emva koko icace gca , njengoko wakwazi ukubeka unyawo ngoku ngaphakathi emlonyeni wakhe ngokwenene wayefuna unyango) ukuba ufuna kakhulu ukufundiswa ngalo mbandela, uFielder wayekulungele ngesipho esifanelekileyo, awabelana ngaso kwi-Twitter.
. @iqosweb uyi XL andithi? pic.twitter.com/lZSZkMbVhe
Nathan fielder (@nathanfielder) Epreli 12, 2017
Ndiqinisekile ukuba asizukubona uSpicer edlala ibhatyi yakhe entsha nangaliphi na ixesha kungekudala, kodwa yingcinga ebalileyo, akunjalo? (Okanye, kwimeko kaSpicer, ukungacingi.)
(nge Nguyen , umfanekiso obonisiweyo: screengrab)
Landela uMary Sue ku Twitter , Facebook , Tumblr , IPinterest , & UGoogle + .
Ihlabathi lemfazwe ye-google imephu
i-iron man pepper kunye ne-tony
I-harley quinn ijongeka njengokhuphiswano olufanayo
inkwenkwezi yetrek jack o lantern
Ukonakala ungutata wam
Kutheni icailou ingenazinwele